Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Politika tamin’ny Aogositra 2009
Politika · Aogositra, 2009
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Aogositra, 2009
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Alzeria
Mpanoratra Clara Onofre · Angola
Notairin'ny herisetra indray i Angola ny alin'ny faha-29 volana Jolay lasa teo. Notifirin'ny olona telo lahy tany amin'ny sisin'ny renivohitra Luanda i Beatriz Salucombo, solombavam-bahoaka avy ao amin'ny antoko politika mitondra MPLA sy ny anadahiny Antonio Neves, tompon'andraikitra ao amin'ny sampana mikarakara ireo vahiny sy mpifindra monina (SME). Bala maro...
09 Aogositra 2009
07 Aogositra 2009
Mpanoratra Winglok Hung · Shina
Mihoatra ny iray volana izay no nisian'ny rotaka tany Xinjiang tamin'ny 5 jolay ary mbola manameloka ny Tandrefana sy ny Rebiya Kadeer ho nampiroborobo ny hetsiky ny mpisintaka tany Xinjiang ny ankamaroan'ny mpiserasera shinoa. Misy ihany na izany aza ny bitsika toy izay hita ato amin'ny BBS of people.com ato...
Mpanoratra Jennifer Brea · Afrika Mainty
03 Aogositra 2009
Mpanoratra Faisal Kapadia · Pakistana
Tanora miasa ao amin'ny fanaovan-gazety lehibe iray i VNR. Nafeniny ny laharam-pindainy tamin'ny voalohany niantsoany ahy haontaniany izay antony hitadiavako tafa aminy. Nanaiky ny hihaona tamiko, teny amin'ny toerana be mpandalo eny Anosy Antananarivo, izy sy ny namany mpanao gazety ihany koa ka eny indray no mijery toerana ahafahana miresaka...